Nanao sonia ny fifanarahana fiaraha-miasa ny Fikambanan'ny Nosy Vanilla sy ny Federasiona Fizahan-tany Réunion
Home » Travel Associations News » Nanao sonia ny fifanarahana fiaraha-miasa ny Fikambanan'ny Nosy Vanilla sy ny Federasiona Fizahan-tany Réunion
Ny Vondron-nosy Vanilla dia manana tanjona hamolavola ny sehatry ny sambo fitsangantsanganana an-dranomasina any amin'ny Ranomasimbe Indianina, ary avy amin'ny mpandeha 14,000 tamin'ny 2014 ka hatramin'ny mpitsidika fitsangantsanganana efa ho 50,000 2018 tamin'ny taona XNUMX, dia tena fahombiazana tokoa io iraka io
Mba haharitra io fitomboana io rehefa mandeha ny fotoana, ny fiakarana dia tsy maintsy miaraka amin'ny kalitaon'ny serivisy tsara indrindra isaky ny seranana, na aiza na aiza nosy.
The Federasiona fizahan-tany Réunion (RTF) tompon'andraikitra amin'ny fandraisana ireo sambo fitsangantsanganana mankany Réunion. Ity fijanonana ity dia ekena noho ny kalitaon'ny fandraisana azy ireo avy amin'ireo mpiasan-tsambo.
Nanapa-kevitra ny hanao sonia ny fifanarahana fiaraha-miasa ny fikambanana roa noho izany, ahafahan'ny protokolon'ny sambo fitaterana an-dranomasina RTF novolavolaina tao Réunion hampiasaina amin'ny seranan-tsambo ao Seychelles, avy eo mankany Madagascar.
Misy nosy hafa koa tafiditra amin'ity hetsika ity izay mikendry ny hanaja ny Ranomasimbe Indianina amin'ny kalitaon'ny seranan-tsambony ary koa ny hatsaran-tarehiny.
Didier Dogley, minisitry ny fizahan-tany, fiaramanidina sivily, seranan-tsambo sy an-dranomasina ary filohan'ny Nosy Vanilla dia nanambara: Manantena serivisy avo lenta ireo mpandraharaha fitsangantsanganana an-tsambo ary asehonay fa nandray an-tanana ny ho avy izahay. ”
“Miara-miasa amin'ny andrim-pizahantany isaky ny nosy izahay mba hanohana azy ireo amin'ny fampiharana dingana iray izay manome toky ireo orinasa. Réunion dia niasa tamin'ny fitantanana ny sambo fitaterana an-tsambo niaraka tamin'ny antoko voakasik'izany rehetra ”, hoy i Azzedine Bouali, filohan'ny federasiona fizahan-tany Réunion.
Sandals Resorts dia mandray ny loka manerantany
Fanafihana antsy an-tsena zoma mainty no mandratra ny mpiantsena any The Hague